WiFi ထိန်းချုပ်တဲ့ software - MYSTERY ZILLION
ToSeWa November 2009 edited December 2010 in File Request လွှတ်ထားတဲ့ wifi ဆီကို .. ဘယ်သူတွေ သုံးနေတယ်.... ဆိုတာကို ကြည့်လို့ရတဲ့ software လေး share ကြပါဗျာ... wifi password ကို ဖော်တဲ့ Program တွေ ရှိနေတော့ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ... အဲဒါလေးအတွက်လဲ . ဘယ်လို program ပြန်သုံးရင်ကောင်းမလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ မှတ်ချက်များ
challenger220 November 2009 edited November 2009 Registered Users ToSeWa;65218 said:လွှတ်ထားတဲ့ wifi ဆီကို .. ဘယ်သူတွေ သုံးနေတယ်.... ဆိုတာကို ကြည့်လို့ရတဲ့ software လေး share ကြပါဗျာ... wifi password ကို ဖော်တဲ့ Program တွေ ရှိနေတော့ .. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ... အဲဒါလေးအတွက်လဲ . ဘယ်လို program ပြန်သုံးရင်ကောင်းမလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
၁။ ဘယ်သူတွေသုံးနေလဲ သိဖို့ Windows ထဲကနေပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်၊ Software သီးသန့်မလိုပါဘူး။ Software သီးသန့်သုံးချင်ရင်လဲ Network Monitor လုပ်တဲ့ Software တွေအများကြီးပါ။ တော်တော်များများက Freeware ဖြစ်လို့ Google ကနေပဲရှာလိုက်ပါ။၂။ Wi-Fi password ဖော်တဲ့ Program တွေရှိတာတော့အမှန်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို လက်ထဲမှာထားပြီး မသုံးတတ်တဲ့လူကများပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် Wi-Fi Network မှန်သမျှကို ဖောက်လို့ရတဲ့ Program ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများ Network ဖောက်ဖို့ဝေးစွ၊ အဲဒါတွေဘယ်လိုသုံးရလဲ ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး။:D၃။ ဘယ်Program မှပြန်သုံးမနေပါနဲ့၊ Password ကို တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပြောင်းပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဖောက်တာကို တော်တဲ့လူကတော့ မရ ရအောင်ဖောက်မှာပဲဗျ၊ ဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူး။ သူဖောက်ချင်ရင်ဖောက်မှာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တော်တဲ့လူဟာလဲ ဒီနိူင်ငံမှာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလောက်တော်သွားရင် ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဗျ။ Ice_Cream December 2009 edited December 2009 Registered Users ဘယ်လိုကြည့်ရလဲမသိဘူးနော် သင်ပေးပါလား တကယ်မသိလို့ပါ:77:[QUOTE=challenger220;65224]၁။ ဘယ်သူတွေသုံးနေလဲ သိဖို့ Windows ထဲကနေပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်၊ Software သီးသန့်မလိုပါဘူး။ Cherryland December 2009 edited December 2009 Registered Users challenger220;65224 said:၂။ Wi-Fi password ဖော်တဲ့ Program တွေရှိတာတော့အမှန်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေကို လက်ထဲမှာထားပြီး မသုံးတတ်တဲ့လူကများပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် Wi-Fi Network မှန်သမျှကို ဖောက်လို့ရတဲ့ Program ကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများ Network ဖောက်ဖို့ဝေးစွ၊ အဲဒါတွေဘယ်လိုသုံးရလဲ ကျွန်တော်လဲမသိပါဘူး။:D
Program ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ မျှလိုက်ဦးလေ။လုပ်လို့ရတာ၊ မရတာက တပိုင်း။ ကျနော်လေ့လာချင်လို့ပါ။လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လဲ အကြောင်းပြန်လိုက်မှာပေါ့။လုပ်လို့မရလဲအကြောင်းပြန်ပါ့မယ်။:77: challenger220 December 2009 edited December 2009 Registered Users Cherryland;67911 said:Program ရှိတယ်ဆိုရင်လဲ မျှလိုက်ဦးလေ။လုပ်လို့ရတာ၊ မရတာက တပိုင်း။ ကျနော်လေ့လာချင်လို့ပါ။လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်လဲ အကြောင်းပြန်လိုက်မှာပေါ့။လုပ်လို့မရလဲအကြောင်းပြန်ပါ့မယ်။:77:
It is the KUbuntu based OS named Back Track4& you can download it freely from it's site.It can hack WEP Network easily but you can't WPA by using it.The OS size is round about 1GB & it's resumable. Search it from Google easily. Use it wisely.Unauthorized access to other network is illegal so don't access to other network. Access to your own network for testing your network security.:D Morris December 2009 edited December 2009 Moderators challenger220;67914 said:It is the KUbuntu based OS named Back Track4& you can download it freely from it's site.It can hack WEP Network easily but you can't WPA by using it.The OS size is round about 1GB & it's resumable. Search it from Google easily. Use it wisely.Unauthorized access to other network is illegal so don't access to other network. Access to your own network for testing your network security.:D
အကိုတော့အဆင်ပြေလားမသိကျွန်တော်ကတော့ တိုင်ပတ်နေတယ် ကျွန်တောဟာက VMware version ဆိုတော့ VM ware ကပြီးသွားရင် save လိုက်တော့ overwrite လုပ်သလိုဖြစ်သွားတယ် ရေလည်တိုင်ပတ်တယ် အခုထိသေချာမသုံးရသေးဘူး ဘာပဲပြောပြော WEP ကို crack လို ့ရတယ်ဆိုရင်တောင် တော်တော်လုပ်စားလို ့ရနေပါပြီဗျာ ::D challenger220 December 2009 edited December 2009 Registered Users Tsuna lade;67957 said:အကိုတော့အဆင်ပြေလားမသိကျွန်တော်ကတော့ တိုင်ပတ်နေတယ် ကျွန်တောဟာက VMware version ဆိုတော့ VM ware ကပြီးသွားရင် save လိုက်တော့ overwrite လုပ်သလိုဖြစ်သွားတယ် ရေလည်တိုင်ပတ်တယ် အခုထိသေချာမသုံးရသေးဘူး ဘာပဲပြောပြော WEP ကို crack လို ့ရတယ်ဆိုရင်တောင် တော်တော်လုပ်စားလို ့ရနေပါပြီဗျာ ::D
ကိုစူဠရေကျွန်တော့်ဟာကတော့ Live CD ဗျ။ သူတို့ Site မှာ သုံးပုံသုံးနည်းကို Video Tutorial ရှိတယ်၊ ကျွန်တော်ဆွဲထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်ရင်းလုပ်ရမှာဆိုတော့ Computer နှစ်လုံးလိုတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ စမ်းရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ အခုထိကို သေသေချာချာ မစမ်းဖြစ်သေးပါဘူးဗျာ။အခုလောလောဆယ် Windows764bit ကိုပဲစမ်းဖြစ်နေတယ်။ BackTrack ကိုတော့ နောက်မှပဲစမ်းတော့မယ် :D Colinn December 2009 edited December 2009 Registered Users Backtrack အကြောင်းကို ဒီ MZ မှာ ရေးထားတာရှိပါတယ် ရှာပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါ။သူ့ကို ဘယ်လိုအသုံးချရတယ်ဆိုတာလဲ short movie နဲ့တင်ထားတာတွေ့ပါတယ်။Internet security မှာလား ဒါမှမဟုတ် Linux မှာလားတော့မသိဘူးဗျ...ရှာကြည့်ပါ။ကျနော်တော့သေချာမမှတ်မိတော့လို့ လင့် မပေးတော့ဘူး.....မနက်ဖြန်အထိရွှေ့လို့ရသောအလုပ်ကို ဒီနေ့အပြီးမလုပ်ပါနဲ့။ ack January 2010 edited January 2010 Registered Users ကျွန်တော့ wifi ကိုတော့....router မှာပါတဲ့....Mac filter နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတယ်။Wireless adapter က တစ်စက်နဲ့တစ်စက် မတူဘူးလေ။မသုံးစေချင်တဲ့ စက် ကို prevent လုပ်ထားလိုက်တယ်။password လည်း မကြာခဏပြောင်းပေးတယ်။ဒါဆိုရင် ok ပါတယ်။ emoracket January 2010 edited January 2010 Registered Users Really,Are you sure?Even can hack WPA.If you can....Nothing is immposible.But Hacing WPA technique is alittle advance.I knew this from KoKoYe. soewin51 January 2010 edited January 2010 Registered Users Once thought safe, WPA Wi-Fi encryption is crackedhttp://www.itworld.com/security/57285/once-thought-safe-wpa-wi-fi-encryption-crackedBut,Choose "WPA"security mode,Don't use"WEP" ack January 2010 edited January 2010 Registered Users emoracket;68952 said:Really,Are you sure?Even can hack WPA.If you can....Nothing is immposible.But Hacing WPA technique is alittle advance.I knew this from KoKoYe.
OkHow to do it, plx? Morris January 2010 edited January 2010 Moderators emoracket;68952 said:Really,Are you sure?Even can hack WPA.If you can....Nothing is immposible.But Hacing WPA technique is alittle advance.I knew this from KoKoYe.
really bro ???? . I deeply interest on it. how should I penetrate ??? walker December 2010 edited December 2010 Registered Users လုပ်လို ့ရပါတယ်....ခင်ဗျားလုပ်တတ်လားဆိုတော ့မတတ်ဘူးပေါ ့နော်....ကြုံဘူးတာလေးကိုပြောချင်လို ့ပါ...သူငယ်ချင်းပြည်ကြီးတရုတ်တစ်ရောက်လာလည်တုန်းကပေါ ့....မင်းဆီမှာအင်တာနက်ရှိလားဆိုတော ့အဲဒီတုန်းကတော ့....အင်တာနက်လိုင်းက..အော်ဒါမှာထားတုန်းဆိုတော့....မရှိဘူးပေါ ့....အဲဒါနှင် ့ဘေးအိမ်တွေက ဝိုင်ဖိုင်အင်တာနက်သုံးလားဆိုတော့...ဘေးအိမ်ကသုံးတယ်ပေါ ့....အဲဒါနှင် ့သူဆီမှာပါလာတဲ ့အခွေတစ်ခွေထုတ်ပြီးတော ့...ဟို set up ...ဒီ set up (ကိုယ်မှ ့မသိတာ..ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ ့) တစ်နာရီလောက်လဲကြာတော ့...အင်တာနက်သုံးလို ့ရပြီတဲ ့...ရော ့ဒီမှာ password ဆိုတော ့....ကိုယ်လည်း...အင်တာနက်လာမချိတ်ခင်ထိတော ့သုံးလိုက်သေးပါတယ်....:biggrin::biggrin: TipTop-ChanChan December 2010 edited December 2010 Registered Users ကျနော်ကတော့ Antamedia Hotspot Software နဲ့ သုံးပြီး ထိန်းထားတာပါ.... ကျနော့်ဆီမှာတော့ ရှိတယ် Wifi Hack တဲ့ software... ဟီးအခု တော့ ဘယ်ချောင်ကပ်နေလဲမသိဘူး... နောက်မှ ရှာပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်:cool::cool: spaceboy December 2010 edited December 2010 Registered Users WEP Wireless Security တွေ အသုံးပြုထားတဲ့ Wireless တွေကို BackTrack Boot CD တွေ အသုံးချပြီး Hack နိုင်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့ရော ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရတယ် ဆိုတာကိုတော့ ဒီလင့်ကနေ ( http://www.mandalaybloggers.org/search/label/Hacking ) လေ့လာကြည့်ကြပါအုန်း။သိရင်တော်ပြီ။ လုပ်တက်ရင်တော်ပြီ။ ဘာမဆိုသိထားရင်၊ ကိုယ်က ဘယ်လိုကာကွယ်ရင် လုံခြုံစိတ်ချရမယ်ဆိုတာ သိသွားတာပေါ့။MAC Filtering တွေနဲ့ တွဲဖက် မသုံးဘဲနဲ့တော့ ဘယ်လို Wireless Security မှ လုံခြုံမှုအပြည့်မပေးနိုင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်ရင်တောင် Wireless Network တွေချိတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းမှာ အဓိကထားပြီးသုံးတာမျိုးတောင်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ Wireless နည်းပညာသုံး ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးမဆို ပျက်ကြသွားအောင် Wireless Network ကြီး တစ်ခုလုံး ဒေါင်းသွားအောင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိနေလို့ပါ။ ( တကယ် ကိုယ်တွေ့ပါ ဖောရှော ရိုက်ချင်း မဟုတ်ပါ။ ) :smile::smile::smile: Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla